सन्दर्भ राष्ट्रिय बाल दिवस : बालबालिकालाई किन सिटमा नबसाउने ? |
प्रकाशित मिति :2015-09-15 09:41:52
ललितपुर, भदौं २९। बच्चा लिएर यात्रा गर्दाको दिन सातदोबाटोकी बिमला बानियाँले चालकसँग झगडा नगरेको दिनै हुन्न । बिमला भन्छिन्, ‘गाडी चढेर बच्चा सिटमा राख्न पाएको हुँदैन, चालकले बच्चा सिटमा नराख्नुस् है भन्न भ्याउँछ ।’
एक दिनको कुरा हो । उनी सातदोबाटोबाट बानेश्वर जाने टेम्पुमा बच्चा लिएर यात्रा गर्दै थिइन् । टेम्पो चालकले भने, ‘ए दिदी ! त्यो बच्चा किन सिटमा राखेको ? बच्चा देखेपछि मान्छे चढ्दैनन् । उठाई हाल्नुस् ।’ बिमला भन्छिन्, ‘म ठूलो अपराधी हो जस्तो गरेर चालकले हप्काए । त्यो सुनेर बच्चा उठ्यो । मैले बस्न लगाउँदै भने, ‘किन बच्चा मान्छे होइन ? ’ चालकले रिसैरिसमा भने, ‘पैसा तिर्नुहुन्छ ? ’ मैले जवाफ फर्काए, ‘गाडी चढेपछि पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ भाई ।’ त्यसपछि उनी चुप लागे ।
आफ्नो बच्चामाथि सार्वजनिक ठाउँमा हुने व्यवहारले उसको भविष्यमा असर परिरहेको छ भन्नेमा आमाबुबा सेचत भएको देखिदैनन् । गएको साताको घटना हो । लगनखेलबाट नानीलाई लिएर एक जना अभिभावक टेम्पो चेढ । टेम्पोमा तीन जना यात्रुमात्रै थिए । स्कुल ड्रेसमा रहेकी छोरीलाई बुबाले आफ्नो अगाडि उभ्याए । अर्का एक यात्रुले सिट छ नी, नानीलाई किन उभ्याएको रु भन्दा ती अभिभावकले जवाफ फर्र्र्काए– नजिकै ओर्लने हो । उनी जाउलाखेलमा उत्रिए । टेम्पो चालकले भने, ‘पैसा तीर्नु पर्छ भनेर उभ्याएको होला नि ? नचाहिँदो काममा पैसा उडाउँछन् । बच्चाको लागि १० रुपैया भाडा तिर्न बोझ मान्छन् ।’
असुरक्षित यात्रा गराउँदा दुर्घटनामा बढि बालकालिका पर्ने बालहेल्प लाइनका कार्यक्रम व्यवस्थापक भरत अधिकारीको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार सन् २०१३ को जनवरीदेखि नोभेम्वरसम्म ११ महिनामा यातायात दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सख्या ११० छ भने अङ्गभङ्ग हुने बालबालिकाको सख्याँ १४७ रहेको छ । यसैगरी प्रहरी नायव उपरिक्षक बालाजि रायमाझीले दिएको जानकारी अनुसार सात महिना यता ५ को मृत्यु भयो भने १० बालबालिकाको अङ्गभङ्ग भएको छ । यसको अर्थ आर्थिक अभाव देखाएर धेरै अभिभावकले आफना बच्चालाई जोखिममा पारिरहेका छन् ।
बालमनोविज्ञ गंगा पाठक भन्छिन्, यो समस्या समाधान गर्न कारवाही थाल्नुपर्छ । दोषी अभिभावक र चालकमाथि कारवाही गरेपछि मात्रै बच्चाले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अधिकारको सम्मान हुन्छ । यसले मात्रै बालबालिकाको सामाजिक हक र सम्मान स्थापित गराउँछ ।’
प्रकाशित मिति २०७२ भदौं २९ गते मंगलवार